Home > fiaran-dalamby Travel torohevitra > Aiza No Mankalaza Ny Taombaovao Shinoa Ao Eoropa
ny Laura Thomas 14/01/2019
Train Travel Grande-Bretagne, Train Travel Frantsa, Train Travel Holland, Train Travel Espaina, fiaran-dalamby Travel torohevitra
(Last Nohavaozina: 15/01/2020)
taom-baovao Sinoa, fantatra koa amin'ny hoe ny lohataona Festival na Taom-baovao, no zava-nitranga manan-danja indrindra ao amin'ny kalandrie sinoa. Izany dia midika hoe manokana fotoana voamariky ny family fivoriana, sakafo fombafomba, fanatitra ao amin'ny tempoly, ary – mazava ho azy – afomanga. Misy zavatra manokana ny Mankalaza ny Taombaovao Shinoa any Eoropa. Tsy manam-paharoa izany fahafahana handray anjara amin'ny fomba amam-panao Shinoa taloha, niaraka indray 4000 taona. Tandremo sao tsy mahita avy izany rehefa manana ny fahafahana!
No.1 for Mankalaza ny Taombaovao Shinoaany Eoropa| Madrid, Espaina
Fa amin'ny taona fahatelo hazakazaka, ny Espaniola renivohitra no toerana mba hankalaza ny Taombaovao Shinoa any Eoropa any Espaina, amin'ny fandaharana ara-kolontsaina sy ny fety nokarakarain'ny Masoivoho Sinoa. Concerts, atrikasa, matso eny an-dalambe, ary gastronomic lalana will all be part of the festivities held in the Usera district – home of Madrid’s Chinatown.
Paris Tsy fotsiny mikasika ny sehatra matso ary na dia be pitsiny ravaka. Ny tsara indrindra-afenina ny amin'ity indray mitoraka ity dia roa tempoly bodista miorina ao amin'ny distrika faha-13. Eto fianakaviana avy any Chine, i Vietnam, ary Kambodza tonga handoa ny manaja sy mandray ao amin'ny Taona vaovao. Ankafizo ny fihetsiketsehana ny zavakanto sy ny asa-tanana Shinoa, fandrahoan-tsakafo sy ny dihy nentin-drazana sy ny mozika. Jereo ny tanàna ny jiro tena hiaina mifanaraka amin'ny ny anarany tamin'ity indray mitoraka ity ny taona. Ary ny zavatra tsara indrindra vitanao fiaran-dalamby mandeha avy any Paris ho any Amsterdam ary mankalaza amin'ny tanàna roa!
London Angletera maka ny fireharehana amin'ny hoe mirehareha fa izy io no misy ny lehibe indrindra manerana izao tontolo izao fomba mba hankalaza ny Taombaovao Shinoa any Eoropa, ivelan'i Asia. Noho izany, Mazava ho azy fa izany no iray namely rehefa Mankalaza ny Taombaovao Shinoa any Eoropa.
Ity tanàna ity mihazona iray andro festival feno hipoka asa ao anatin'izany ny sakafo nentim-paharazana, isan-taona matso, fombafomba sy ny asa tanana nentim-paharazana. (Ianao efa anay amin'ny sakafo nentim-paharazana!) Count antsika amin'ny!
Misy sehatra telo lehibe tany Angletera, izay mihazona ireo fankalazàna; Trafalgar Square, Chinatown sy Shaftesbury Avenue. Isaky ny tsy manam-paharoa eo manokana sy ny asa ny zava-nitranga dia manolotra; mpitsidika dia Tena sarotra amin'ny fifidianana izay ho atao.
Inona no fomba tsara indrindra Mankalaza ny Taombaovao Shinoa any Eoropa sy hahazo ny anankiray amin'ireo tanàna ireo? By Train, mazava ho azy! Use SaveATrain au livre ny tsara indrindra fifanarahana amin'ny minitra!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/celebrate-chinese-new-year-europe/ – (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Train Travel Belzika, Train Travel Frantsa, Train Travel Alemaina, Train Travel Holland, Train Travel UK, Travel Europe
Train Tsidika, Train Travel Italia, fiaran-dalamby Travel torohevitra, Travel Europe